साताको चौथो कारोबार दिन बुधवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३८ दशमलव ३५ अंकले घटेको छ ।
नेप्से परिसूचक २ हजार ८९८ दशमलव ३१ विन्दुमा झरेको हो । यो दिन कारोबारमा आएका २२८ ओटा धितोपत्रको १ करोड १८ लाख ३७ हजार २१५ कित्ता शेयर ८४ हजार २३३ पटकमा रू. ६ अर्ब २ करोड १३ लाख ११ हजार ८८१ दशमलव शून्य ३ खरीदविक्री भएको छ ।
अघिल्लो कारोबार दिन मंगलवार भने ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । यो दिन कारोबारमा आएका ती धितोपत्र मध्ये दुई ओटा धितोपत्रको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । यो दिन बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९७ प्रतिशत र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९६ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
बुद्धभुमि नेपालको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.२८७ दशमलव ८० र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.७१४ पुगेको छ । उता यो दिन सबैभन्दा बढी घलेम्दी हाइड्रोपावरका शेयरधनीले गुमाएका छन् ।कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यो दिन ४ दशमलव ३४ प्रतिशत घटेसँगै सर्वाधिक गुमाएका हुन् । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.३५३ मा झरेको छ ।
त्यसैगरी कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य यो दिन ४ दशमलव २३ प्रतिशत घटेर रू.१ हजार ३११ दशमलव १० कायम भएको छ । बुधवार सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भने अपि पावर कम्पनीको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. २० करोड ३२ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ५४४ कायम भएको छ ।
बुधवार पनि नेप्सेमा करेक्सन आएको छ । लगातार केहि दिनदेखि बढेको बजारमा कारोबारीहरुले नाफा बुक गरेकाले करेक्सन आएको हो ।छोटो समयममा नै नेप्से परिसूचक लगभग ७०० अंकले बढेको छ । सोही कारण पनि बजारमा करेक्सन आएको हो । यस अवधिमा अल्पकालिन लगानीकर्ता तथा कारोबारीहरुले राम्रै प्रतिफल प्राप्त गरेका छन् ।